केसीज्यू, यसपटक कति जनाको ज्यान लिएपछि पुर्पुरोमा हात राख्नुहुन्छ ? - Deshko News Deshko News केसीज्यू, यसपटक कति जनाको ज्यान लिएपछि पुर्पुरोमा हात राख्नुहुन्छ ? - Deshko News
केसीज्यू, यसपटक कति जनाको ज्यान लिएपछि पुर्पुरोमा हात राख्नुहुन्छ ?
केसीको बाेली र व्यवहार हेर्दा उनी साच्चै कानुनको माथि छन जस्तो लाग्छ । उनको बोली सुन्दा रत्नपार्कमा २० जना मान्छे जम्मा गरेर भाषण दिँदै हिड्ने मुकुन्द घिमिरेको जस्तो छ । उनी प्रधानमन्त्री माथि तथानाम गाली गर्छन । यसपटक त इलाम पुग्नु अघिदेखि नै कम्युनिष्ट सिध्याउछु भन्दै नेकपाका नेताहरूलाइ अामाचकारी गाली गरे । हेर्नुहोस न्युज २४ टेलिभिजनले तयार पारेको रिपोर्ट ।
त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकका अनुसार गोविन्द केसीले आफैँले नेतृत्व गरेको हाडजोर्नी विभाग नमुना बनाउन कहिल्यै चाहेनन् बरु त्यहाँ जाने त्यास्ता बिरामीलाई विपि स्मृति अस्पताल र बिएण्डबी अस्पताल पठाउने वातावरण सिर्जना गरे । केसीका १५ औँ अनसनका क्रममा मोरङमा ११ महिनाका कास्मिर लम्सालको ज्यान गयो । केसीको समर्थनका नाममा अस्पताल बन्द गरेर चिकित्सक हुलुहुज्जतमा लाग्दा सामान्य उपचारसमेत नपाउँदा ती अबोध बालकले ज्यान गुमाउन पुगे । केसीको अघिल्ला श्रृंखलाको अनसनकै क्रममा उपचार नपाउँदा केही बिरामीले मृत्युवरण गर्न पुगे । उपचारकै क्रममा रहेका धेरै बिरामी माथि दूव्र्यवहार भए । यसपटक कति जनाले ज्यान गुमाएपछि उनले गोहीको अाँशु चुहाउने हुन त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रयोग भैरहेको सलाइन समेत थुतेर फाल्ने काम भयो । अस्पताल र चिकित्सकले गर्नै नहुने निकृष्ट काम केसीका समर्थकबाट भयो ।
१६ अाैँ श्रृंखलाको नाममा उनले यसपटक इलामबाट अनशनको नाैटंकी सुरू गरेका छन । सुरूमा उनका माग ठीकै जस्तो देखिए पनि अहिले उनी नेविसंघकै नेताको शैलीमा कांग्रेसजको भजन गाउने र कम्युनिष्टहरूको सत्तोसराप गर्ने अवस्थामा पुगेका छन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनी कसका लागि अनशनको नाममा एजेण्डा बोकेर हिडेका छन ।
जागिर खान जुम्ला जान पर्ने भयो भनेर वीर अस्पतालको जागिर छाडेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमाम जागिर खाए । सरकारी कोटामा विदेशमा एमबिबिएस पढेर आए तर जेमा उनको ज्ञान र विशेषज्ञता छ त्यसमा उनी अब्बल बन्ने कोशिश नै कहिल्यै गरेनन् बरु अति राजनीति गर्नेतर्फ लागे । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको दूरदशा हुनुमा गोविन्द केसी पनि एउटा मुख्य कारक हुन ।
डा भगवान कोइरालालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको जिम्मेवारी दिएर नमुन अस्पताल बनाउन सरकारले चाहेको थियो तर केसीले अनसन बसेर डा कोइरालालाई कामै गर्न दिएनन् । अस्पतालमा जाने बिरामीले उपचार नपाई फर्कने, उपचार भैरहेका विरामीको सलाई नै थुतेर फाल्ने जस्ता निकृष्ट कामहरु केसी समर्थकले गरे पछि कार्यकारी निर्देशक पदबाट डा कोइरालाले राजिनामा दिए । त्यसकारण चिकित्सक गाेविन्द केसीले उनको अनसनबाट सिर्जित समस्याको विषयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै राजिनामा गरेर त्रिवि शिक्षणा अस्पताललार्इ मानवीय सेवा गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूकाे सेवा गर्ने थलाे बनाउन सहयाेग गर्नुपर्छ ।
केसीले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर मेडिकल शिक्षाका नाममा जे गर्नुपर्छ भनिरहेका छन विगतमा यिनले सरकारी कोटामा विदेश पढेर आएपछि जुम्ला हुम्लामा गएर जागिर खाएको भए आज उत्पादन भएका चिकित्सकमा पनि त्यस्तो नैतिकता देखिन्थ्यो होला तर उनले बिगारेको बाटोमा धेरै हिड्न चाहेनन् र केसीकै शैली धेरैले अपनाए ।
आज त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हाडजोर्नी विभागको प्रमुख भएर दैनिक रूपमा सयौँ बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने केसी कांग्रेसको झोला बोकेर नेपाल घुमिरहेका छन । यसले उनमा भएको बचेखुचेको इमान्दारिता समेत समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय समितिमा छलफलका लागि बोलाउँदा नजाने, तीन जना मान्छेसँग बसेर छलफलमा भाग लिन नसक्ने तर रेडियोमा गीत बजाएको शैलीमा मेडिकल माफियाको एजेण्डा बोकेर बर्बराएरमात्र समस्याको समाधान हुन्छ त ? अरूलाई माफिया भन्दै आफैँ माफियाको इशारामा नाचिरहेका छन गोविन्द केसी । यो उनको माफिया नृत्यको अन्तिम श्रृंखला बनोस शुभकामना छ ।